Idzo nhanhatu nzvimbo dzakakosha dzekushanyira muFuerteventura | Absolut Kufamba
Idzo nhanhatu nzvimbo dzakakosha dzekushanyira muFuerteventura
Absolut Kufamba | | Canary Islands
Zhizha rinopera uye matsutso anotanga, nguva yegore inoratidzirwa nekudzikiswa kwemaawa ezuva, kudonha kwematembiricha, uye zvingave sei neimwe nzira, kudzoka kuzviito. Rondedzero yezvinhu zviri izvo chikonzero cheiyo post-yezororo chirwere chakatambura nechikamu chikuru chevagari. Asi usazvidya moyo, mwedzi waGunyana, Gumiguru naNovember zvakafanana nekufamba, kunyanya kana tichizviita pa nzvimbo dzine zuva dzakadai seFuerteventura.
Zuva rinovhenekera kwemazuva mazana matatu pagore pachitsuwa ichi cheCanary archipelago iri muAtlantic Ocean. Iwo wakasarudzika mukana wekunakidzwa nechitsuwa ichi chisingaperi zhizha mune imwe yevakuru-chete mahotera muFuerteventura, nepo anopfuura makiromita zana nemakumi mashanu emahombekombe anokuita kuti unzwe muparadhiso. Usapotsa idzi nzvimbo dzakakosha dzekushanyira muFuerteventura.
1 Corralejo Dunes Natural Park
2 Jandía Peninsula
3 Villa yeBetancuria
4 Mapako eAjuy
5 Gomo dzvene reTindaya
Makiromita makumi matatu nemashanu chete akaparadzanisa Puerto del Rosario, guta guru reFuerteventura, kubva ku Natural Park yeDunes yeCorralejo. Iyi ndima yejecha re organic organic (iyo inouya kubva mukuparara uye kupwanywa kwemahombekombe emamollusk, bivalves, pamwe nezvimwe zvipuka zvemumvura) ine pamusoro peanopfuura mahekita 35 2.600 ejecha jena jena. Nzvimbo yemurenje yenzvimbo ino yakachengetedzwa inovanza rimwe remabhiza eparadhiso pachitsuwa ichi, Cofete beach. Iine makiromita gumi nemaviri ejecha jena jena uye mvura ye-turquoise, ino nzvimbo yemusango kuchamhembe kweJandía peninsula inopa vafambi rondedzero isingatsanangurike yerusununguko nerunyararo.
Yakaparadzaniswa kubva kune yakasara yeFuerteventura neIsthmus yeRusvingo, iri kumaodzanyemba kwechitsuwa, iyo Jandía Peninsula ndiyo imwe yemapaki akakura echisikigo muCanary archipelago. Nzvimbo yerenje kwaunogona kusvika pakuziva chikamu chinotyisa chechitsuwa chemazhizha asingagumi. Inzvimbo yakanyanyisa iyo inokoshesa kusiana kukuru kwemiti yekupedzisira semucherechedzo we Fuerteventura, iyo cardon de Jandía. Kuti ushanyire nzvimbo iyi yemashiripiti hapana zvirinani kupfuura kugara paIberostar Selection Fuerteventura Palace, hotera ine mukana wakakura wemigwagwa yakasviba inobatana neJandía Peninsula.
Guta reBetancuria rakavambwa mu1404 naJean de Bethencourt, wekutanga kukunda kweCanary Islands. Iri taundi diki riri kumahombekombe ekumadokero kwechitsuwa Raive guta guru rekutonga reFuerteventura kusvika 1834Kunyangwe parizvino iri dunhu rine vanhu vashoma rine vagari ve800 chete. Kunyangwe isina mhenderekedzo dzeparadhisi, guta iri rezvivakwa zvevachena zvaro iyo poindi yekunakisisa kwetsika pachitsuwa. Mazana evashanyi anoshanyira nzvimbo ino mazuva ese kushanyira kereke yeSanta María de Betancuria, iri pakati penhoroondo yeguta, kana iyo Archaeological Museum, uko vashanyi vane mukana wekuona kuti vagari vayo vekare vaigara sei.
Ajuy ndiyo inonakidza nzvimbo yegeological yeCanary archipelago. Uyu musha mudiki wekuredza wevagari zana nemakumi mashanu chete, uri kumahombekombe ekumadokero eFuerteventura, unomiririra gungwa raro rakanaka jecha dema rakakomberedzwa nemawere uye, kunyanya, kumapako ayo echisikigo. Iyo yemukati meAjuy Cave, yakazivisa Natural Monument uye inozivikanwa seimwe yenzvimbo zana dzeakanyanya kufarira geological pasirese neInternational Union yeGeological Sayenzi (IUGS), inobvumira vafambi kuziva mavambo uye kuumbwa kweFuerteventura makore angangoita mamirioni makumi manomwe apfuura. Rwendo rwemashiripiti kuenda kune yakapfuura yechitsuwa uko iwe kwaunogona zvakare kuona matombo ekare muCanary Islands, mune anonzi Basal Complex.
Gomo dzvene reTindaya
Gomo reTindaya riri kuchamhembe kwakadziva kumadokero kweFuerteventura, padyo neguta risingazivikanwe mumaspala eLa Oliva. Yakaziviswa Chirevo Chemusikirwo mu1994 nekuda kwenzvimbo yayo huru uye kukosha kwayo, ichive chiratidzo pachitsuwa ichi, nzvimbo ino inonyanya kuzivikanwa ne angangoita mazana matatu podomorphic akanyorwa (zvakavezwa pamatombo muchimiro chetsoka) zvinonzi ndezvetsika yechiaboriginal yechitsuwa. Iwo majos kana majoreros, vagari vepakutanga veFuerteventura, vaifunga Tindaya gomo rinoyera uye ndokupa masimba emashiripiti kwairi. Muchokwadi, Tindaya inozivikanwa se "Gomo revaroyi".
Hatigone kusiya Fuerteventura tisinganakirwe nezvimwe zvigadzirwa zveyakafuma gastronomy. Kunyange vafambi vazhinji vasingazive, Fuerteventura inogadzira imwe yeakanakisa mbudzi chezi munyika, seinozivikanwa neWorld Cheese Championship, ichipa Majorero Maxorta chizi sedzakanakisa pasirese muchikamu cheyakaomeswa mukaka wembudzi chizi nemafuta. Nenzira iyi, vanoda chikafu ichi havagone kupotsa iyo Majorero Cheese Museum, uko kwavanogona kuwana mavambo uye kugadzirwa kwechigadzirwa chakakurumbira pasi rose.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Absolut Kufamba » Idzo nhanhatu nzvimbo dzakakosha dzekushanyira muFuerteventura
Chii chaungaona muBiarritz